Samsung waxay muujineysaa sida loo daryeelo Galaxy Fold ee fiidiyowga ah | Androidsis
Samsung waxay muujineysaa sida loo daryeelo Galaxy Fold ee fiidiyowga ah
Kadib bilo aan hubin iyo dhibaatooyin taleefan, Samsung ayaa toddobaadkan ka hirgelisay Galaxy Fold dhowr suuq oo ku yaal Yurub, halka Spain ay imaaneyso bisha Oktoobar. Bilihii la soo dhaafay, shirkaddu waxay ka shaqeyneysay soo bandhigida isbeddelada taleefanka, si loo xalliyo dhibaatooyinkii ay soo mareen bilo ka hor. Isbeddeladan ayaa la muujiyay naftooda fiidiyow dhowaan.
Shirkaddu waxay sii wadaa inay taxaddar ba'an ku raadiso taleefanka. Sidaa darteed, Samsung hadda waxay daabacdaa fiidiyoow ay ku muujinayaan habka ay isticmaaleyaashu u daryeelaan Galaxy Fold. Waddo looga fogaado dhibaatooyinka cusub ee taleefanka ugu horreeya ee isku duuban ee sumadda.
Ka dib markii dhibaatooyinku soo gaareen gu'gan, oo ay arkeen khaladaadka ay isticmaaleyaasha qaarkood sameeyeen, shirkaddu waxay dooneysaa inay ka fogaato halista. Waxay ogyihiin in Galaxy Fold uu yahay taleefan gaar ah, si aad ugu shaqeyso taxaddar. Tani waa waxa ay ku muujinayaan fiidiyowgan, habka ugu wanaagsan ee loo daryeelo taleefanka.
Fiidiyow wax ku ool ah oo loogu talagalay dadka isticmaala, oo shaki la'aan xallinaya shakiyada qaar badan oo qabay, ku saabsan sida loo daryeelo taleefanka flip saxiixa. Marka dad badan waxay u noqon doontaa caawimaad wanaagsan, gaar ahaan hadda oo horeyba looga iibsan karo waddamada Yurub qaarkood.
Sidii horeba u ahayd bishii Abriil, Galaxy Fold horeyba wuxuu ula yimid ilaaliye shaashad lagu dhex dhisay. Samsung waxay ku nuuxnuuxsatay tan fiidiyowga, sidaa darteed looma baahna in mid lagu daro, maxaa yeelay waxay horay u leedahay hal heer ahaan. Intaa waxaa dheer, waxaa mar kale la ogaaday, si cad, in duruufo jira la oran karin ilaaliyaha ha laga saaro.
Waa sii deyn weyn oo loogu talagalay Samsung. Fold-ka Galaxy-ga ah ayaa xoogaa madax-xanuun ah u keenay soo-saaraha bilihii la soo dhaafay, laakiin waxay u muuqataa in wax walba laga tagay. Maxaa intaa ka badan, soo dhaweynta taleefanka ee suuqa ayaa ah mid aad u wanaagsan, sidee ku ogaanay dhawaanahan. Marka arrimuhu way u dhoola cadeynayaan shirkadda Kuuriya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung waxay muujineysaa sida loo daryeelo Galaxy Fold ee fiidiyowga ah
Galaxy A70s ayaa lagu soo bandhigi doonaa bishaan gudaha Hindiya
Prime Prime: Diiwaangelinta Prime Prime ee Ardayda